I-pop diva Beyonce Knowles (Beyonce Knowles) uqalile ukurekhoda i-albhamu yakhe entsha, eya kuba yintathu kwi-discographie yedwa yomculi. Sebenza kumlandeli we "B * Usuku" ngo-2006 waqala kwelinye lama-studios eNew York ngaphantsi kolawulo lwe-duo yomlimi kumntu kaChris "onobuqili" uStewart noChave Harrell.
Ngokutsho kukaStewart, amathrekhi amaningana sele erekhodiweyo kwi-albhamu ezayo. "UBeyonce uyingcali," utshilo umvelisi. "Uyakuthanda kakhulu oko akwenzayo, ngoko naye usebenza ezandleni zakhe." Nsuku zonke sisebenza iingcamango zeengoma ezintathu okanye ezine. Ukuba yonke into iyaqhubeka ngelo xesha, irekhodi liya kulungela kungekudala. "
Kungenzeka ukuba i-albhamu entsha uBeyonce iya kugqitywa ngokubambisana kunye nomqambi odumileyo, kwaye ngexesha elifanayo umlingane we-pop star Jay-Z. "Emva kokuba basebenze kunye, kwaye le ntsebenziswano yaba yimpumelelo kakhulu (uStewart ucinga ngengoma yesibili" 03 Bonnie & Clyde. "- Umq.). ngoko andiyikubona nayiphi na imiqobo yokuphindaphinda kwesi silingo, "- uthi umvelisi.
Khumbula ukuba i-albhamu yangaphambili yomculi, "uB * Usuku" okhankanywe ngasentla, wathola izitifiketi ezintathu ze "platinum" ezivela kuMbutho weCandelo lokuBhalisa eMelika kwaye zathengisa iikopi ezingaphezu kwezigidi ezi-7 emhlabeni jikelele.
Ngokuphathelele ubomi bomntu kaBeyonce, umtshato oyimfihlo kunye no-Jay-Z ngo-Ephreli 4 walo nyaka, siza kuxela ukuba ii-American editions zixilongo ngamandla ukuba umculi oneminyaka engama-26 ulungele ukuba ngumama. "UBeyonce u-100% ukhulelwe," watsho omnye wabahlobo bakhe. "Yingakho badlala umtshato ngokukhawuleza." UBeyonce ungumKatolika othembekileyo, kwaye amaKristu aneenkcubeko zentsapho ezinamandla. "
Tamed macho nguAntonio Banderas
Biography kaLeonid Yarmolnik
Impumelelo yabasetyhini abathandwayo nabahle
Indlela yokuhlangabezana nomnyaka omtsha ngomnye
Umsebenzi wesibindi emzimbeni womntu
Indlela yokurhoxisa isifo sokutshiswa komzwelo?
UCachelor Alexei Vorobyov wabika ngokukhulelwa kwentombi yakhe kunye nomtshato ozayo, ividiyo
Umonakalo kunye nenzuzo yokutya kwasekuseni ngokukhawuleza kokutya
Merengi iintliziyo nge-ayisikrimu
Kwinqanaba le-"shuhera" enkulu: umlimi "weNdlu-2" u-Alexei Mikhailovsky waxoshwa kwiprojekthi
Isobho seTatato nge-brandy
Ingqalelo encinci ihlawulwa kumntwana